Damaanad - Beijing Zohonice Qalabka Qurxinta Co., Ltd.
1. Adeegga Dayactirka
(1) Dammaanad: 1 sano laga bilaabo maalintii aad iibsatay badeecada, haddii ay jirto cilad, waxaan ku siin doonnaa adeeg dayactir oo bilaash ah.
(2) Haddii aad wax dhibaato ah qabtid inta aad isticmaaleyso alaabtayada, fadlan nagala soo xiriir Telefoon, Fakis, Skype, WhatsApp, Viber ama emayl waxaanna kaaga jawaabi doonnaa hal saac gudahood oo waxaan ku xallin doonnaa dhibaatooyinkaaga sida ugu dhakhsaha badan.
(3) Waxaan ka qaadnaa tayada alaabadayada isticmaalka caadiga ah. Haddii martigeliyaha caadiga ah, waxaan bixinnaa dayactir bilaash ah. Ka dib muddada damaanadda, waxaan kaliya ka qaadnaa qiimaha qiimaha qaybaha dayactirka. Hanuuninta farsamadu waa u bilaash nolosha oo dhan.
(1) Tababar farsamo:
Waxaa jiri doona buuga isticmaalaha ama fiidiyowga kaa caawinaya inaad barato mashiinka, sida loo rakibo, sida loo shaqeeyo, sida loo dayactiro mashiinka, ka sokow, waxaa jiri doona kooxda adeegga iibka kadib oo bixin doonta adeegga khadka tooska ah ee 24 saacadood.
(2) Tababarka caafimaadka:
Xarunta tababarka qurxinta ee Zohonice waxaa loo aasaasay macaamiisha soo booqata. Waxaad kaheli kartaa hagaha tababarka caafimaad ee takhasuska leh dhaqtarkayaga ama qurxiyeyaasha, waxaad sidoo kale tababbarkaan ku qaadan kartaa E-mailka, telefoonka iyo aaladaha internetka, iwm.